SIDA LOO SAMEEYO BALLI ON GOOBTAADA - SAMEE NAFTAADA
Goobta si habboon loo doortay ee mustaqbalka balli waa fure u ah hawlgalka muddada-dheer iyo ilaalinta muuqaal muuqaal leh.
Samee gees yar qurux badan oo ku yaal aqalkaaga dalkaaga halkaas oo aad mar walba ku qaadan kartid waxtarka caafimaadka: barkad, ilo iyo biyo.
Iyadoo la tixgelinayo gargaarka iyo ciidda
Waxaa jira xeerar dhowr ah oo muhiim ah oo kaa caawin doona inaad doorato meesha saxda ah ee naqshadaada:
Furitaanka goobta. Waxaa lagu talinayaa in ay doortaan kuwa ugu furan, bilaashka ah geedaha, duurka iyo goobaha kale. Joogitaanka dhirta ku dhow waa wax aan loo baahnayn sababo kala duwan: nidaamka xididada geedaha ayaa waxyeeleyn doona derbiyada kaydka, iyo caleemaha, miraha ama laamuhu, biyaha ku dhacaya, way isku jimci doonaan, taasoo keenta in biyuhu si deg deg ah uga sii daraan.
Relief iyo ciidda. Xulashada ugu fiican waa goob qoyan oo qoyan muddo dheer ka dib roobka, sababtoo ah loamy ama dhoobo dhoobo si dhakhso ah ayaa looga hortagaa biyaha ka baxsanaya. Meelaynta balli halkan waxay ku siin doontaa fursad ay si weyn ugu badbaadinayso biyaha korontada. Goob weyn oo loogu talagalay kaydka waxay u adeegi kartaa niyad jabka ama hollowsyada oo ay sameeyaan hab dabiici ah. Meesha goobta balliinka ku yaala goobta oo leh heer sare oo u hoggaansan biyaha dhulka ayaa u baahan doona hirgelinta nidaamyada dheecaanka.
U dhawaanshaha ilaha biyaha. Baabuurta noocan oo kale ah waa in ay si taxadar leh oo joogto ah u joogteeyaan: baddal biyaha, nadiifi algae, sidaa daraadeed waa mid aad u muhiim ah in la siiyo meel u dhow ilaha biyaha, taas oo si weyn u dedejin doonta una fududaata habka buuxinta dhismaha biyo cusub.
Suurtagalnimada in la ballaariyo dhulka. Haddii baaxadda goobta ay u ogolaato, markaa waa inaad horay u sii fekereysaa suurtogalnimada ballaarinta balli: sameynta qaababka qurxinta ee cusub, dhismaha buundada, gasebos, iwm.
Nalalka saxda ah
Qoraxdu waxay door weyn ka cayaareysaa doorashada goobta mustaqbalka ee dhismaha. Aad bay muhiim u tahay inaad doorato degaan dhexdhexaad ah, iyada oo aan qorraxdu si toos ah lahayn. Iftiiminta joogtada ah ee qorraxdu waxay qalajin doontaa biyaha iyo kor u qaadista firfircoonaanta bakteeriyada biyaha, firfircoonida koritaanka algae cagaaran, dhismaha dhoobada. Dhanka kale, la'aanta qoraxda waxay keeni doontaa in la joojiyo koritaanka dhirta ornamental.
Waa muhiim! Waa suurtogal in la dhiso balli dabeeci ah on carrada nooc kasta. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah kharashyada iyo waqtiga dhismaha ayaa si weyn u kordhaya.
aagga kor ku xusan oo qorraxdu ka muuqato 11:00 duhurnimo iyo 3:00 galabtii kadib;
guud ee is-beddelka - aan ka badnayn 6 saacadood maalintii;
madow ee balli - ugu yaraan 40% marka ugu sarraysa qorraxda.
Waxaa jira tiknoolajiyo dhowr ah oo loogu talagalay dhisidda balli farsamo oo leh faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Ka dib markaad baraneyso sifooyinka mid kasta, waxaad samayn kartaa xulashada ugu fiican ee goobtaada.
Haddii aad haysatid aqalada, aadna jeceshahay inaad dhisto, baro sida loo sameeyo barxadda beerta, dhagax dhagax, baalal, gariir, dabayl, iyo qulqulka qalalan.
Habka ugu fudud ee ugu raqiisan uguna haboon ee lagu dhiso balli waa filim gaar ah. Ururka wuxuu isticmaalaa 2 nooc oo filim ah:
Chloride Polyvinyl: waxaa laga helaa duubka, wuxuu leeyahay kharash yar, wuxuu leeyahay midab khafiif ah midab. Laakiin madow waxaa badanaa la isticmaalaa si loo abuuro balli.
Rubber Butil: taabashada waxay u egtahay xargaha, waxay leedahay caabbi baraf sare oo iska caabisa oo jeexan. Xitaa baqshiinka xitaa at -60 ° C.
Ka dib marka la doorto filim ku habboon waa la dhammeeyaa, sii wad hawlaha dhismaha:
Samee meeleeynta goobta goobta barta laga dhisi doono.
Xoq gooji sida ku cad dhismada.
Diyaarso substrate. Si loo dhammeeyo, darbiyada iyo dabaqa godadka ayaa si wanaagsan loo tufaya, lakabka korontada ayaa la dhigaa, taas oo noqon karta geotextile ama filimka PVC, oo lagu daboolo ciid iyo mar labaad dib loo dhigo.
Filim waxaa la dhigayaa lakabka cammirka. Inta lagu jiro dhacdadan, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhibaatooyin qaarkood: marka hore, sababtoo ah dusha sare ee filimka ayaa laga yaabaa inuu abuuro laab laab. Tani waa wax caadi ah, laakiin waxa fiican inaad isku daydo inaad ka dhigto hal laab wayn, marka loo eego kuwa yar yar. Marka labaad, laguma talin in la ogaado walxaha qalabka, sababtoo ah waxay ku burburin kartaa miisaanka biyaha.
Ka dib markii la geliyo filimku wuxuu sii wadi doonaa biyaha. Boondheer ka buuxsantay biyo ayaa tagay dhowr maalmood, ka dibna qaybaha saxda ah ee filinka ayaa si taxadar leh looga gooyey.
Talaabada ugu dambeysa waa in la xoojiyo khadka "xeebta". Waxyaabaha lagu xoojiyay maaddada dhagxaanta, dhagaxyada, geoodhka, daaqada.
Habkani wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan marka loo eego kuwa kale:
kharashka yar ee alaabada;
fududeyn iyo sahlanaanta hirgelinta;
kartida ah in la abuuro naqshad qaab-dhismeed kasta iyo cabir;
xawaaraha deg-degga ah ee abuurista balli;
Ma jirto baahi loo qabo in lala xiriiro khabiiro, xitaa macallin aan la aqoon ayaa dhisi kara kaydka.
Ma taqaanaa? Inta badan barta hoose ee balli waxaa lagu xardhay filim buluug ah, oo loo malaynayo in ay noqoto biyo. Dhab ahaan, hoosta hoose ee dabiiciga ah ma laha - waa mugdi madow ama madow. Waa midabkaan waana in la doorbido.
Marka aad abaabusho balli ku salaysan filim, waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaatid inuusan awoodi doonin inuu shaqeeyo muddo dheer, waana inaad diyaargarowdid wixii lagaa dayactirayo sannadkiiba. Filimku waa sahlan yahay inuu waxyeello, jeexo ama la gooyo marka nadiifinta. Intaa waxaa dheer, geesaha jiifa dusha sare waxay dhalin karaan saameeya qorraxda.
Boorash lagu sameeyo
Mid ka mid ah kuwa ugu adkeysan kara, la isku hallayn karo oo loo adkeyn karo ayaa loo tixgeliyaa balli la taaban karo. Dhismaha dhismaha dhowr marxaladood:
Waxay jeexayaan godadka, iyadoo ay ku jiraan 20-25 cm, taasoo lagama maarmaan u ah inay xoojiso hoosta.
Ka saar dhagaxyada godadka, haraadiga xididada iyo walxaha kale.
Qeybta hoose waxaa lagu daboolay qashin leh lakabka 15 cm oo hoos u riixay.
Laga bilaabo bartamaha dhinaca dhinacyada, ku dheji lakabka biyo-difaaca.
Beton waa la shubay: xalka waa la duudduubay, mesh dib u dhis ah ayaa la sameeyaa, iyo isku darka waa la shubay. Waxaa loo oggol yahay in la adkeeyo oo marka ugu dambeysa gali lakabka dhalo dareere ah.
Boondhiga la taaban karo wuxuu awoodaa inuu "ku faanto" faa'iidooyinka soo socda:
xoog iyo adkaysi u ah qaabdhismeedka;
suurtagalnimada in la abuuro kaydka qaab kasta;
kharashka yar ee xalka la taaban karo.
Baro sida loo sameeyo jidka yar, iyo sidoo kale la taaban karo.
Si kastaba ha ahaatee, si ay u dhisaan baaquli qaas ah ma aha mid aad u fudud sida ay u muuqato in jaleecada hore. Inta lagu guda jiro shaqadu waxay qaadan doontaa dadaallo iyo wakhti badan. Intaa waxaa dheer, qaab-dhismeedka la taaban karo waxay u baahan tahay farsamayn dheeraad ah ee habka qabow u adkaysata iyo muraayad dareere ah
Balli ka soo
Ugu fudud ee ururka waa balli ka soo madhxii hore. Dukaamada qalabka waxaad ka iibsan kartaa naqshadeynta polyetylen ama polyvinyl chloride.
Waa muhiim! Tijaabinta caadiga ah waxay ubaahan tahay in biyaha iyo dibedda loo ilaaliyo biyaha. Waxaa jira noocyo alaab ah oo aan ka baqayn qoyaan, laakiin waxay aad u qaali yihiin oo u baahan tiknoolajiyad gaar ah. Sababtan darted, waa wax aan habooneyn in la isticmaalo xaddiga qaaliga ah si loo abuuro balli sida ugu badan.
Boorashyada noocan oo kale ah waa mid aad u adag, qabow u adkaysta. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin:
miisaanka yar ee dhismaha;
roonaanta iyo sahlanaanta rakibidda;
nolol wanaagsan oo hagaagsan - ilaa 15 sano;
Daryeelka aan hoos udhicin.
Boorashka caaga ah ma aha mid aan dhib lahayn, kuwaas oo lagu xusay:
cabbirka yar iyo awood la'aanta in la ballaariyo kaydka;
qiimaha sare ee alaabada tayada leh;
muuqaal aan caadi ahayn.
Haddii aad rabto inaad xayeysiiso guri guri, goob ama dacha, hubso inaad akhrido sida loo doorto oo loo rakibo xayndaabka lebiska, birta ama xayndaab qoryaha ah, xayndaab ka sameysan silsilad isku xiran, xayndaab ka soo wareega wareega iyo xayndaabka.
Waxa kale oo aad samayn kartaa hannaan macmal ah oo laga helo habdhaqan la adeegsaday. Tusaale ahaan, maydhashada qubeyska birta ee birta ah waxay u adeegi kartaa qaab wanaagsan oo loogu talagalay kaydka mustaqbalka. Balli noocan oo kale ah wuxuu leeyahay awood sare oo leh saameynta qorraxda, biyaha, waa mid aad u adag oo awood u leh inuu adeego sanado badan.
Dhibaatada naqshadahani waa muuqaal aan caadi ahayn, maaddaama qubaysku leeyahay qaab qaabeysan oo toos ah, iyo sidoo kale miisaan weyn oo maaddo ah, oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka ka imaan kara gaadiidkooda goobta. Foomka loogu talagalay kaydka wuxuu sidoo kale u adeegi karaa sidii taariikhi hore ee baabuurta. Dabcan, muhiim maahan inaad ka hadasho balli ballaaran halkan, laakiin waa wax macquul ah in la abaabulo geeska asalka ah ee asalka ah ee goobtaada. Dhismuhu waa lagama maarmaan:
Iska daa dusha sare;
qodo dalool wax yar oo ku wareegsan wareegga wareegga;
dusha sare saar oo ku dabool foorno;
hagaajin filimka, ku shub biyo biyo.
Ma taqaanaa? Haddii ee kaydka qorsheeyey socodka kalluunka, qoto dheer waa in ay ahaataa ugu yaraan 2 m, iyo xayawaanka cawska ah - oo aan ka yarayn 2.5 m. Waa qoto dheer taasi oo u ogolaanaysa biyo aan la qaboojin xilliga jiilaalka.
Aagga xeebta ee kaydka waxaa lagu qurxin karaa dhagaxyo, dhagaxyo, dhir kala duwan.
Sida loo sameeyo balli
Si aad u sameyso balli aad u fiican oo leh gacmahaaga, waxaad sameyneysaa dadaal yar, iyo sidoo kale inaad ku qaadato wakhti iyo lacag. Laakiin natiijadu waa u qalantaa, oo kaydka yar-yar-yar ayaa adiga iyo qoyskaagaba ku farxi doonaa sanado badan.
Waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato sida loo helo biyaha goobta ceelka, iyo sida loo doorto ceelka iyo ceelka si loo siiyo.
Nidaamka dhismaha ee dhismaha, kaas oo ka shaqayn doona sanadka oo dhan, wuxuu ka kooban yahay talaabooyinka soo socda:
Sameynta godka. Mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan iyo isla markaaba tallaabooyin adag ayaa ah in la qodo god. On rise of ceel waa lagama maarmaan in la sameeyo dhowr terraces: ugu weyn - at qoto dheer oo ku saabsan 2 m halkaas oo kalluunka ku noolaan doonaa. Kadib, si tartiib tartiib ah u kordha, qoto dheer oo ah 1 m iyo 0.5 m, siday u kala horreeyaan Daryeelka waa in la qaataa si loo hubiyo in derbiyada godadka aysan si buuxda u jilicsanayn, laakiin la sameeyay qaabab yar, haddii kale filimka la dhigay si fudud "celi". Ka dib markii la qodayo qashinka, waxay lagama maarmaan u tahay aagga xeebta agagaarka wareegga balliga si ay u saaraan lakabka sare ee carrada qiyaas ahaan qiyaastii 0.5 m, sameynta haraag yar. Rugta noocan oo kale ah waa in la sameeyaa iyadoo hoos loo dhigo khafiif ah si biyuhu ka daba socdaan roobabku ma dhexmaraan kaydka, laakiin waxay ku jirtaa cidhiidhiga. Kadibna waa inaad si taxadar leh u jajabisaa derbiyada iyo hoosta: marka hore isticmaal kursi balaadhan, ka dibna ku shub darbiyada iyo hoosta qodista leh lakabka khafiifka ah ee cammaanka iyo ciddida cagahaaga.
Xoojinta dhismaha. Si loo siiyo awoodda dhismaha waxay u baahan doontaa cement branding 500, biyaha iyo waraabinta caadiga ah. Shaqooyinka waxaa lagu fuliyaa habka soo socota ee soo socda: Tallaabooyinka qodista iyo salka hoose waxay si fiican u waraabin jireen biyo waraabin, ka dibna waxay ku rusheeyeen lakab aad u cufan ee sibidhka qallalan. Marka sibidhka loo nuugo, qaababka xoogga leh "dufan" ee dusha sare. Nidaamyada noocan oo kale ah ayaa lagu fuliyaa aagga oo dhan. Marka ay dhammeeyaan, waxaa lagama maarmaan ah in laga tago balli si ay u dajiso 1 maalin si ay u sameyso sibidhka.
Soo bandhigida filimka adag iyo dhamaystirka. Qeybta hoose ee ceelka (meeshii bistooladu waa 2 m qoto dheer) filimka ayaa la dhigaa, ama barkad qubeys ah ayaa loo isticmaali karaa alaab ahaan. Barkad ama filin, hoos ayaa la daboolay oo dhulka la dhigaa oo leh jawaan biraha ah (barxadda waxaa lagu samayn karaa ul usbuuciin leh warqad P). Marka xigta, iyadoo la kaashanayo filim qabyo ah waa in la dhigaa dhulka oo dhan. Si aad u ilaaliso filinka oo aanad u guurin, waxay ku xiran tahay garbaha dhagaxyada ama lebbiska. Dusha sare ee qoraalka ah waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhajiyo filimka dhameystiran si isku mid ah, isagoo hagaajinaya dhammaan wafaqyada leh dhagxaan yar oo dhagaxyo ah. Filimka dhameystiran wuxuu leeyahay difaac adag oo wanaagsan, caabbi barafeed, wuxuu socon karaa in ka badan hal sano. Ka dib markaad foorno dhigatid, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dhammaan geeska xeebta ay jirto qalab ku filan oo ah 20-30 cm, taas oo lagama maarmaan u ah inay ku xirnaadaan ku xirnaanta geesaha.
Qurxinta. Qaybta xeebta ee balliinka ku wareegsan wareega wareegga waa in la dhigaa meelo yar oo alwaax ah (logs). Waxaa lagu talinayaa in "ku haboonaato" mid kasta oo isku midka ah oo leh hal cabbir, sidaas darteed xayndaabka noocan oo kale ah ayaa leh muuqaal heesti ah. Sidoo kale, aagga u dhexeeya tuulada qoryaha iyo geesaha balli ayaa lagu dabooli karaa dhagaxyada dabiiciga ah. Next, balli ayaa lagu shubay biyo oo lagu qurxiyo ee ay ku talinayaan: dhirta la beeray, algae ama rushes, dhigay jilbadaha alwaax. Haddii kaydka ay ku jiri doonaan kalluunka, markaa waxaad u baahan tahay inaad ku darto biyo yar yar.
Video: sida loo sameeyo kaydka - barkad goobta, bixinta
Si shakhsi ahaan loo abuuro balli muddo dheer ku faraxsan tahay shaqadooda iyo muuqaalka qurxinta, waa lagama maarmaan in si joogto ah u ilaaliyaan isaga. Daryeelka kaydka ayaa ka kooban dhawr qodob oo muhiim ah:
Nadiifinta biyaha. Nidaamkan waxaa lagu samayn karaa meeldhexaad iyadoo la adeegsanayo shabaqa caadiga ah ama shimbiraha, ama iyadoo la adeegsanayo filtarrada iyo bambooyin.
Heerka biyaha. Waa lagama maarmaan in si joogto ah loola socdo heerarka dareeraha ee kaydka, iyo marka ay dhacdo, ku dar biyo, oo kaliya nadiif ah, difaacay.
Xakameynta dhirta. Sidaas darteed balli aan korin, waxaa lagu talinayaa in la kormeero dhalashada algae, iyo kobaca firfircoon ee loo isticmaalo biopreparations gaar ah oo aan si xun u saamayn ku noolaanshaha noolaha. Waxaad sidoo kale u baahan tahay wakhti aad kaga baxdo dhirta la qalajiyey, kuwa dhintay iyo kuwo cayayaanka ah.
Nadiifinta biyaha UV. Biyo si joogto ah u raaci nadiifinta qalabka leh shucaaca ultraviolet, taas oo burburin doonta fayruusyada iyo bakteeriyada ku jira biyaha.
Shabakada amniga. Ka hor intaanay bilaabmin caleenta caleen, waxaa lagama maarmaan ah in lagu adkeeyo shabakadda biyaha kaydka, taas oo ka hortagi doonta caleenta dhicid.
Nadiifinta qalabka. Ka hor xilliga qaboobaha, ka saar dhammaan qalabka laga bilaabo balli, bamgareynta iyo miiraha.
Kaydka dabiiciga ah ee guriga lagu sameeyo waa shey cajiib ah oo dabiici ah, oo ay abuurtay gacmo aadanaha. Ha dafirin naftaada raaxada inaad dhisatid jannada, xasilooni ah oo aad ku raaxeysan kartid waqtigaaga xorta ah. Waxaa intaa dheer, way sahlan tahay in la sameeyo tan marka la eego marka la eego jaleecada hore.